OS X Yosemite မှ user ည့်သည်သုံးသူကိုဖျက်ပါ ငါက Mac ကပါ
OS X Yosemite 10.10 ထဲမှာ guest user ကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်မလဲ
OS X Yosemite အသစ်ကိုတပ်ဆင်သောသုံးစွဲသူအသစ်များ၏သံသယများထဲမှတစ်ခုမှာမည်သို့ဖြစ်သည် guest ည့်သည်အသုံးပြုသူကိုဖယ်ရှားပါ ၎င်းသည် login တွင်ကျွန်ုပ်တို့ Mac ကိုစဖွင့်တိုင်းသို့မဟုတ်အိပ်ပြီးနောက်နောက်ပါ ၀ င်သည်တိုင်းတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်၏လုပ်ငန်းအများစုကိုကောင်းစွာသိပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၎င်းကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုမသိသောအခြားသုံးစွဲသူများအားကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသွားမည်ဖြစ်သည်။
၏အိမ်စာ အသုံးပြုသူအသစ်တစ်ခုကိုပိတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြုလုပ်ပါ ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးလွန်ခဲ့သောလများကပင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည် အသုံးပြုသူအသစ်ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲ အသင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမည်သို့ပင်ရှိပါစေကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ပေါ်တွင် OS X Yosemite login တွင်ပါ ၀ င်သော user ည့်သည်ကိုမည်သို့ဖျက်ရမည်ကိုယခုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကရိုက်ထည့်ပါ System ကို ဦး စားပေး ငါတို့အဘို့အဖြောင့် ဦး တည်တာပေါ့ အသုံးပြုသူများနှင့်အုပ်စုများ ကိုနှိပ်ပြီးရိုက်ထည့်ပါ -
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် access ကိုသော့ဖွင့်ရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းအတွက် click ကိုနှိပ်ပါ အောက်ပိုင်းသော့ခလောက် ကျွန်ုပ်တို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏စကားဝှက်ကိုရေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကသော့ခလောက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဖိတ်ကြားခံထားရသူကိုတိုက်ရိုက်နှိပ်လိုက်ပါ check ည့်သည်များဤကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုပါ။ အောက်ပါ logins များအတွက်ဒီအလိုအလျှောက်ပိတ်ထားလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့သော့ခတ်ပိတ်ပြီးနောက်တစ်ခါသော့ခလောက်ပိတ်ပြီးထွက်သွားသည်။
အခုပြီးပြီ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူသာပေါ်လာလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝှက်ကိုထည့်ရမည့် Mac ကိုစဖွင့်သည့်အချိန်တွင်။ ဤအရာသည်မကြာမီကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးမည့်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာဖြစ်သည် OS X Yosemite ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်စကားဝှက်တောင်းဆိုမှုကိုပိတ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » OS X ကို Yosemite » OS X Yosemite 10.10 ထဲမှာ guest user ကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်မလဲ
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အားအမြဲကူညီပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ MAC ပျောက်ဆုံး / ခိုးခံရလျှင် Guest ည့်သည်ကကူညီသည်သတိပြုပါ ...
Daniel Valdes ဟုသူကပြောသည်
ငါလုပ်ပြီးပြီ၊ ဒါပေမယ့် user ည့်သည်အသုံးပြုသူကိုပိတ်ထားရင်တောင်သူက system startup မှာပေါ်နေတယ်။ ဒီကိစ္စမှာဘာလုပ်ရမလဲ။
ကောင်းပြီ၊ ဒါကထူးဆန်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးတာနဲ့ငါ activate မရဘူး အခြားသုံးစွဲသူတစ် ဦး ကိုဖန်တီးပြီး၎င်းသည်သူတစ် ဦး တည်းသက်ဝင်သည်ဟုတ်မဟုတ်ကြည့်ရှုရန်၎င်းကိုပိတ်ထားပါ။ Hackintosh ထဲမှာလား?
ဒါပေမယ့် user ည့်သည်အသုံးပြုသူပျောက်ကွယ်သွားသည်မဟုတ် ... rrrr ...
မင်္ဂလာပါ Ede, မင်းအမှားတစ်ခုခုလုပ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါပျောက်သွားရင်😉
ကောင်းပြီ၊ သူတို့မကောင်းဘူး၊ ငါဒီအဆင့်တွေကိုသိတယ်၊ ငါလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ ငါအကူအညီတောင်းခံလာတယ်၊ ငါအမှားတစ်ခုခုလုပ်မိပြီလို့သံသယဖြစ်ခဲ့ရင်သင့်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းထပ်တူလုပ်ခဲ့တယ်။ အကောင့်ပေါ်နေဆဲဖြစ်သည်။
အမှားအားဖြင့်သူ့ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခဲ့တယ်၊ Mac ကအဲဒါကိုသုံးတယ်၊ ဒါပေမယ့်မီးခိုးရောင်မျက်နှာပြင်ပေါ်လာတယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုအင်တာနက်သုံးခွင့်ပေးတယ်၊ အခန်းကိုပိတ်ဖို့ option ကမပေါ်လာဘူး၊ ငါ restart လုပ်တယ်၊ ပိတ်တာ၊ ငါ restart လုပ်ပြီးပြန်ဖွင့်တာ မီးခိုးရောင်အကူအညီနဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ည့်သည်ပါ
ငါ့ကိုအတူတူပါပဲဖြစ်ပျက် ... သင်ကဖြေရှင်းနိုင်မလား
မဖြေရှင်းနိုင်သောပြissueနာ - ကျွန်ုပ်သည် User ည့်သည်သုံးစွဲသူအားပိတ်ထားသည် (အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း)၊ ၎င်းသည် startup တွင်ပေါ်နေမည်။
မည်သည့်ရှင်းပြချက်နှင့် / သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းချက်? ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ။
Alfonso Aguilar ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Jordi ။
Alfonso Aguilar ထံပြန်သွားပါ
Jaime Uribe (@haimeum) ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းစွာလှူဒါန်းခဲ့သည်အလှူငွေများအတွက် Cool ။
Jaime Uribe (@haimeum) အားပြန်ပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ပြtheနာကိုဖြေရှင်းလိုက်ပြီ။ အခုကျွန်တော့်လက်တော့ပ်မှာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဘယ်သူမှမရှိဘူး၊ မင်းကအရမ်းကြင်နာတယ်။
နှစ်ရက်ရှိပြီဖြစ်သည်။ အကောင့်ဖျက်ခြင်း…»ပုံမှန်လား။ ကွန်ပျူတာကိုငါပိတ်လို့မရဘူး
ငါစီမံခန့်ခွဲသူအကောင့်အဟောင်းကိုဖျက်ပြီးအသစ်တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုငါ့ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဖိုင်တွေကိုငါရှာလို့မရဘူး၊ ဖျက်ပစ်လို့ရမလား။
ဟိုင်းအလန်။ အကယ်၍ သင်သည် Home folder ကိုဖျက်ရန်ရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါက Time Machine သည်ကျွန်ုပ်စဉ်းစားနိုင်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုဖျက်ခြင်းသည်သင်ရွေးလိုက်လျှင်အချက်အလက်များကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်၊ သင်ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
သင်သည် Time Machine (သို့) Finder> Devices> "သင်၏ Mac"> HD Macintosh တွင်ကြည့်ပါ
မင်္ဂလာပါဂျိုဒီ၊ အမှန်တရားကတော့ငါအကောင့်ကိုဖျက်လိုက်တဲ့အခါဖျက်ပစ်လို့ပြောတဲ့အကွက်တစ်ခုပဲရတယ်။ ငါအရမ်းအပူတပြင်းငါပြန်လည်ထူထောင်ချင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေရှိခဲ့တယ်။ ဖြေကြားမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါနဲ့လည်းအတူတူပါပဲ၊ ငါ guest ည့်သည်အကောင့်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးကွန်ပျူတာကို restart လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာမှမထူးပါဘူး။
ငါဘယ်လောက်အထိထပ်မံသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုရှိပါစေ၊ Safari နှင့်သာဖွင့်လှစ်သော account ည့်အကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းမည်မဟုတ်ပါ။
Mario Alberto အားပြန်ပြောပါ
session တစ်ခုကိုဖျက်ရန် ၁၂ နာရီကြာခဲ့ပြီးကွန်ပျူတာကိုပိတ်ထားသည်မဟုတ်
ဟဲလိုအခုငါအတူတူပါပဲ !!! ငါ့ကိုဘာအကြံပေးချင်တာလဲ ???
ဟယ်လို! အကောင့်တခုကိုဘယ်လိုဖျက်ရမလဲသိလား။ သော့ဖွင့်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်သည်အကောင့်များကိုမဖျက်နိုင်ပါ။ မင်းငါ့ကိုထည့်ခွင့်ပေးပါ။ ထိုအခါငါငါမရှိတော့အသုံးပြုရန်နှင့်ငါဖျက်ပစ်ချင်သောအသုံးပြုသူနှစ် ဦး ရှိသည်။ ကူညီကြပါ! 🙂
Marius Benjamin FIRA ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ, ငါညွှန်ပြအဆင့်ဆင့်လိုက်နာပါပြီကြောင့် login မှဖယ်ရှားပစ်မထားပါ။ မည်သူမဆိုမည်သည့်အကြံဥာဏ်များရှိပါသလား ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Marius BENJAMIN FIRA ကိုပြန်ကြားပါ
ယောဟန်နှစ်ခြင်း Schmidt က ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ mac တွင်အသုံးပြုသူနှစ် ဦး ကိုဖန်တီးပါ။ တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏အစ်မနှင့်တစ်ယောက်အတွက်ကျွန်ုပ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် system ကိုပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏အစ်မအကောင့်ထဲသို့ ၀ င်ပါ၊ ပေါ်လာလိမ့်မယ်၊ ၎င်းသည်မိခင်အကောင့်တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး၊ နှစ်ခုလုံးသည်တူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အုပ်ချုပ်သူများကဲ့သို့ activated နေကြသည်၊ ၎င်းသည်မည်သို့ဖြစ်နိုင်သနည်း။ ပြီးသားမှစ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Juan Bautista Schmidt ကိုပြန်ပြောပါ
mac အသုံးပြုသူတစ် ဦး ကိုဖျက်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
ငါ့မှာတစ်နေ့ရှိတယ်၊ ငါကဖျက်ပစ်နေတုန်းပဲ၊ အဲဒါကိုငါမဖျက်မချင်းငါကွန်ပျူတာကိုပိတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူး
အဲရစ် perera ramos ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်း - အမှားအားဖြင့်သူတို့ကအသုံးပြုသူကိုပိတ်လိုက်ပြီး user ည့်သည်ကိုအလိုအလျောက်သတ်မှတ်ပေးသည်။ ပြproblemနာကအသုံးပြုသူအမည်နဲ့စကားဝှက်ကိုမသိဘူး၊ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။
pereick ramos Erick အားပြန်ပြောပါ
သင်၏အကောင့်၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုသင်မမှတ်မိပါကလုံခြုံစိတ်ချရသောစနစ်ဖြင့် ဝင်ရောက်၍ စကားဝှက်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်ကြိုးစားနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အယ်လ် Capitan တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိမသေချာပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် MacBook Pro ရှိပြီး account ည့်သည်အကောင့်သည်အစတွင်ပေါ်လာပြီးကျွန်ုပ်ဘာမှမဝင်နိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ
Miguel Villatoro ဟုသူကပြောသည်
ဘယ်လိုငါသံသယရှိသည် ... ။ ကျွန်တော့် Macbook မှာ gmail ကို access လုပ်တယ်။ Google က youtube နှင့်အခြားသူများငုပ်။ ဒီအကြိမ်ပေါင်းများစွာ
… .. ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုဖျက်ရမှန်းကျွန်တော်မသိဘူး
Miguel Villatoro အားပြန်ပြောပါ
ဂါဗြေလဗွန် Chrismar ဟုသူကပြောသည်
- စနစ် PREFERENCES
- တက်ကြွစွာ Firewall
Gabriel von Chrismar ကိုပြန်သွားပါ
Paul fajardo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် OSx Capitan ရှိပြီးအခြားအသုံးပြုသူသာပေါ်လာပြီးကျွန်ုပ်ပျောက်ဆုံးသွားသည်။ ကူညီပါ၊ ကျွန်ုပ်လျှို့ဝှက်နံပါတ်များကိုကြိုးစားကြည့်ပြီးအလုပ်မလုပ်ပါ
Paul Fajardo ကိုပြန်ပြောပါ
iCloud preferences တွင် "Find My Mac" option ကိုဖွင့်သောအခါဤသည်ဖြစ်ပျက်သည်။ အဲဒါကိုပိတ်ထားပါကပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်
ဟယ်လို! အတိအကျဆိုရသော်၎င်းကိုကျွန်ုပ် activate လုပ်ပြီးသည်နှင့်အသုံးပြုသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုပုံပေါ်သည်။ အမှန်စင်စစ် "ကျွန်ုပ်၏ Mac ကိုရှာပါ" ကိုမပိတ်ပါသို့မဟုတ်၎င်းကိုမည်သို့ဖြစ်စေဖျက်ပစ်နိုင်မည်နည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်္ဂလာပါ။
Jaime Alonso ၊ ဟုသူကပြောသည်
မူလမြင်ကွင်းပေါ်ရှိအခြားရွေးစရာကို disable လုပ်ရန်အဖြေရှာရုံမျှသာမကများစွာသောသူတို့ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ရသည်။ ၎င်းသည်မှားယွင်းမှုမဟုတ်ပါ၊ guest ည့်သည်အသုံးပြုသူကိုပိတ်ထားပြီးနောက်၌ပင်ပေါ်ပေါက်နိုင်သည့်အခြားအသုံးပြုသူဖြစ်သော root အသုံးပြုသူပေါ်လာသည်။ ဒါကြောင့်ဖြေရှင်းချက်သည် directory utility ရှိ root အသုံးပြုသူကိုပိတ်ခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။
Jaime Alonso အားစာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်အတွက်ဘယ် iPad Mini Model ကမှန်ပါ့မလဲ။
သင်၏ Mac Mac G5 အဟောင်းဖြင့်ပရိဘောဂများကိုတည်ဆောက်ပါ